Umhla My Pet » Kutheni Ufanele ukuba Zama ukutshintsha Guy lwakho
Kutheni Ufanele ukuba Zama ukutshintsha Guy lwakho
Kukho kwathiwa okuninzi ngendlela uyakwazi ukutshintsha umntu wakho. uyakwazi okumdambisa njani uze wenze kuye umntu ofuna ukuba. Kodwa masenze ukunyaniseka apha, oko kubhaliweyo usoloko iintetho langoku kwaye kubonakala ukuba ukushiya imiphumo ixesha elide izenzo ezinjalo. Inyaniso kukuba ufuna ukutshintsha umntu nje kuba yena Asikokwakho.
Xa umthande okanye ngenene ifana mfo awufuni ukuba ukuzitshintsha. Izinto abanithiyayo ngaye ukuba ungaqubudi ngaye kuba izinto ezenza yena kanye ungubani na. Ukongeza kwixesha elide baya uzakuphela abafuni ukuba utshintsha kubo. Yaye ngaba bagxeka? Ngaba ungathanda umntu ukutshintsha nina tyendyana lasses? Deep phantsi kungakhathaliseki thina asifuni uthando isiqingatha-ntliziyo. Uthando ukuba kuyahlwa nje umfana ngubani na tye, thina. Nabantu abafumana olu hlobo ezimangalisayo (Kunjalo tenxileyo kodwa ulwalamano nganye kwimizuzu sayo) umthande apho siyixhamle, onwabile, bekhuselwa kukwazi ukuba uyakuthanda wena akhalipha. Ke musa ukuzama ukutshintsha mfo yokuqala sidibana kungena umntu kukuba. Zilinda kwaye fumana umntu otshintsha ilizwe labo ngaphandle kokufuna ukutshintsha ngokwabo.
Uthando ingentlonipho. Kufuneka ubeke oko ulindele ukuba uphume. Ngoko ke, ukuba awufuni ukuba ukutshintsha ngoko ke kufuneka sibe imbeko ukutshintsha kuye. Ngaphandle ukuba ngenene abamthandayo ingcamango ukuguqula nayiphi na inxalenye naye kuyiwela ingqondo yakho. Mna andikanyuki, esithi ukuba akuyi uya kufumana iqabane ubomi obude ngokusebenzisa yonke mbuna / ukutshintsha indlela kodwa akayi kufumana uthando lokwenene ngaloo ndlela. Ngoko ke isigqibo unawe. Ngaba ufuna umntu okanye lowo?
Ngaba elisekunene kuwa Ndayithanda indoda etshatileyo?